Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Haiti » Ala ọma jijiji nwụrụ na Haiti karịrị 1400
Caribbean • Akụkọ Haiti • Akụkọ Ahụike • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ọnụ ọgụgụ ndị ala ọma jijiji nwụrụ na Haiti - site n'ikike @aliceexz - twitter
Ụlọ ndị mebiri emebi abụghị ihe karịrị mkpọmkpọ ebe, ụmụaka kewapụrụ onwe ha na nne na nna ha, na Tropical Storm Grace nwere ike bute oke mmiri ozuzo na -atụgharị n'ime idei mmiri na mkpọda ala mgbe nnukwu ala ọma jijiji 7.2 mere na Haiti na Satọde, Ọgọst 14, 2021. Taa, ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ anwụ ruru 1,419 .
E mebiwo ihe karịrị ụlọ 7,000, enwere opekata mpe mmadụ 6,900 merụrụ ahụ.
Prime Minista Haiti Ariel Henry ekwuputala ọnọdụ mberede mberede otu ọnwa.
N'elu ala ọma jijiji ahụ, Haiti na -ahụ maka ime ihe ike ndị omekome na -aga n'ihu na ogbugbu onye isi ala ya Jovenel Moise na nso nso a bụ onye agbagburu n'ụlọ ya ihe karịrị otu ọnwa gara aga.
Ala ọma jijiji ahụ mere na mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ nke mba ahụ wee mebie ụfọdụ obodo kpamkpam na ọtụtụ puku enweghị ebe obibi. E meela ihe karịrị ụlọ 7,000, ma enwere opekata mpe mmadụ 6,900 merụrụ ahụ, ọtụtụ n'ime ha na -eche ka a kpọga ha ụlọ ọgwụ. Ọtụtụ n'ime ndị merụrụ ahụ na -eche ihu nwere ike bute ọrịa na -arapara n'ahụ ihe na -enweghị nlekọta ahụike.
Site n'ikike obama.org
Obodo Les Cayes nke dị n'ụsọ oké osimiri jisiri ike mebiri site na ala ọma jijiji ahụ ebe ọtụtụ ezinụlọ na -arapara n'ihe ha nwere ike ịchekwa ka ha na -apụ n'abalị n'èzí n'èzí.
Prime Minista Haiti Ariel Henry ekwuputala ọnọdụ mberede otu ọnwa. PM kpọrọ oku maka "ịdị n'otu ahaziri ahazi" na -echeta oke ọgba aghara nke mbọ enyemaka mgbe ala ọma jijiji ahụ mere na afọ 11 gara aga.
A na -aga enye aka na mpaghara ndị kacha nwee mkpa na ebe ụlọ ọgwụ na -enweghị ike. Ụgbọ elu nnapụta na -eme ọtụtụ enyemaka ụgbọ elu dị ka o kwere mee site n'ọtụtụ obodo dị na mba ahụ.
Akpọwo Samantha Power dị ka USAID Onye nchịkwa nke Onye isi ala US Joe Biden ka ọ lekọta enyemaka sitere na United States maka Haiti. A na-eziga ndị ọrụ nyocha na nnapụta mmadụ 65 site na Virginia. Ndị nche n'ụsọ osimiri US na -ebuga ndị merụrụ ahụ yana ndị ọrụ ahụike yana ụgbọ mmiri na ụgbọ elu. Pọọsụ ndị Sameria, otu enyemaka dị na North Carolina, na -eziga ndị ọkachamara nzaghachi ọdachi 13 na tọn 31 nke ihe mberede.
Otu UN World Food Programme na -arụ ọrụ izipu nnukwu ngwongwo nri na Tuesday.
Ọrụ ndị otu na -agbagha enyemaka enyemaka, ọkachasị na Martissant, mpaghara oke osimiri ọdịda anyanwụ nke isi obodo. Ndị ọrụ gọọmentị ga -eso ndị omekome ahụ kwenye ka ha kwe ka ndị nnọchi anya mmadụ abụọ ga -abịa n'ụbọchị.
N'elu ime ihe ike ndị otu na -aga n'ihu, Haiti na -ahụ maka ogbugbu onye isi ala ya Jovenel Moise n'oge na -adịbeghị anya bụ onye agbagburu n'ụlọ ya ihe karịrị otu ọnwa gara aga na -ahapụ mba ahụ n'ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Na imezu ya, enwere nsogbu nke oria ojoo COVID-19.
Dị ka US Geological Survey (USGS) si kwuo, a na-enwe oke-5.2 ala ọma jijiji mgbe ala ọma jijiji ahụ gasịrị, ala ọma jijiji 9 na-esote ya na atụmanya karịa n'ụbọchị ndị na-abịanụ.
Onye isi ala Guyana Irfaan Ali
Ozi olile anya sitere na Guyana
Peoples Progressive Party Civic/Guyana kwuputara na tweet taa na ụlọ ọrụ Guyana nke Prime Minister kwupụtara na e debela akaụntụ akụ iji nata onyinye maka enyemaka enyemaka ala ọma jijiji Haiti. Nkwupụta ahụ gụrụ akụkụ ya:
"N'ikwekọ na mkpebi gọọmentị ime ngwa na ngwa ngwa na nzaghachi ala ọma jijiji na -emebi ihe na nso nso a na steeti CARICOM nke Republic of Haiti, na ịgbaso mkparịta ụka ekwentị kpọmkwem na Satọde gara aga n'etiti Onye isi ala ya Irfaan Ali na Onye isi ala Haitian a họpụtara ọhụrụ, Honorable Dr. Ariel Henry, Ọfịs Prime Minister tọrọ ntọala akaụntụ nchekwa mmadụ na Republic Bank (Guyana) Limited, n'aha Civil Defence Commission.
“OPM ga -eso ndị otu obodo anyị, ndị ọrụ onwe anyị na ndị mmekọ ndị ọzọ na -arụkọ ọrụ ọnụ iji nweta ego ngwa ngwa maka nhazi, nnukwu enyemaka enyemaka maka ndị Haiti metụtara.
“Mkpebi Guyana iguzosi ike n'ịdị n'otu n'oge dị mma na mgbe adịghị mma na ụmụnna anyị CARICOM n'ofe mpaghara ahụ ka kwụ chịm. Dị ka anyị mere n'oge gara aga, anyị ga -ejikọ ume na akụrụngwa iji zute ihe ịma aka mmadụ kachasị ọhụrụ iji wetara ụmụnna anyị Hatian nkasi obi na ahụ efe ozugbo enwere ike.
"Anyị na -arịọ ka ndị Guyanese nọ na mba ofesi sonye na mbọ anyị iji nye enyemaka dị ukwuu site na nzaghachi ma ọ bụ mkpokọta."
Ndị njem nlegharị anya German na-emezi Iju mmiri Jamaica